Kaddib markii uu ku biiray Real Madrid, Hazard oo wax laga weydiiyay isbar-bardhiga isaga iyo Messi & jawaabtii uu ka bixiyay | wardeeqnews News Online News http://wardeeqnews.com/
Kaddib markii uu ku biiray Real Madrid, Hazard oo wax laga weydiiyay isbar-bardhiga isaga iyo Messi & jawaabtii uu ka bixiyay
. Xiddiga reer Belgian iyo kooxda Real Madrid ee Eden Hazard ayaa iska diiday in lala bar-bardhigo kabtanka Barcelona ee Lionel Messi, wuxuuna markale xaqiijiyay in xiddiga reer Argantina uu yahay kan ugu fiican.
Eden Hazard ayaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay taageerayaasha ugu caansan ee Lionel Messi, wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay kan ugu fiican taariikhda kubadda cagta ee aduunka.
Hadalka Eden Hazard ayaa wuxuu imaanayaa markii ugu horeysay isagoo ah ciyaaryahan ka tirsan kooxda Real Madrid oo ay si xoogan ugu xilfaltamaan kubadda cagta, kaddib markii uu kasoo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka ay caawa wada ciyaari doonaan xulalka Belgian Vs Scotland.
Eden Hazard ayaa inta uu ku gudi jiray shirka jaraa’id waxaa la weydiiyay su’aal ahayd suurtagalnimada bar-bardhiga isaga iyo Lionel Messi wuxuuna ku jawaab celiyay:
“Waa wax aan macquul aheyn, waa sax inay jiraan waxyaabo aan isaga egnahay, tusaale ahaan labadeenaba waxaa nahay kuwo gaaban, isla markaana leh xawaare xoogan, laakiin wuxuu dhaliyaa goolal kulan kasta, balse anigu ma sameeyo sidaas, suurtoagalna ma noqoneyso in leyla bar-bardhigo qofaan leyla bar-bardhigi karin”.
“Waxaa jira hal ciyaaryahan oo ah kan ugu fiican taariikhda, waana Leo Messi”.